संसदमा ओलीको कडा आलोचना
सद्भावना पार्टीका सांसद तथा सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले ओलीको कडा आलोचना गर्नभएको छ । संसदको शनिबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले सरकारको सबै अर्थ विधेयकहरू अस्वीकृत हुँदा पनि सरकार कायम रहेको भन्दै यस्तो पनि हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
‘तीन वटा अर्थ विधेयकहरू अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन्छन् भनेर ठानेको थिए’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्था आउँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री सरकारमा बसिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार छाड्दा पनि सरकार रहिरहने कस्तो व्यवस्था हो यो ?’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सहमति नजुट्दा बैठकमा बबाल
पहिलो समाचारके के.सी जायज हुन् ? अर्को समाचारप्रचण्डबाट खुशी , ओलीको गल्ति : नेपाल